बिहुँको नवयुवक आधारभूत बिद्यालय भवन भत्कियो : लाखौँको क्षेती, पठनपाठन प्रभावित ! – ebaglung.com
बिहुँको नवयुवक आधारभूत बिद्यालय भवन भत्कियो : लाखौँको क्षेती, पठनपाठन प्रभावित !
२०७६ बैशाख २४, मंगलवार १७:११	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
भरत सापकोटा बिहुँ बागलुङ २०७६ बैशाख २४ । काठेखोला गाउपालिका ५ विहुँ श्रीपाली स्थित नव युवक आधारभूत विद्यालय भवन भत्किएको छ । अलीअली भूकम्पन भएपछी भवनको गाह्रो र त्यस तलको भाग पूर्णरुमा भत्किएको प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी दिएका छन् । विद्यालय भवनको गाह्रो लगाउदै गरेका डकर्मी छविलाल परियारले भने भर्खरै मात्र झ्याल राखेर गाह्रो लगाउन थाललेको के थियौ एक्कासी हल्लियो र भवन ढल्यो ।
बिक्रम सम्वत २०३७ सालमा स्थापित सो आधारभूत बिद्यालय भवन २०७२ सालको महाभूकम्पमा केहि चर्किएको स्थानीयको भनाई रहेको छ । गत २०७५ चैत महिनामा आएको हावाहुरीका कारण विद्यालयको छाना उडाएकोले केहि दिन पहिले छाना छाउने प्रयोजनका लागी गाउपालिकाबाट रु १ लाख र एक हप्ता अगाडीमात्र भवन मरमतका लागी रु २ लाखख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको विद्यालय भवनको गाह्रो लगाउने र पर्सि कर्कट पाताले छाना छाउने गरी निर्माण कार्य भैरहेका अवस्थमा आजै ४ बजेको समयमा एक्कासी गाह्रो भत्किएर भवन क्षतविक्षत भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण सापकोटाले बताए ।
प्रधानाध्यापक सापकोटाका अनुसार आभारभूत विद्यालयमा हाल १ सय ७५ जना विद्यार्थीहरुले पठनपाठन गरिरहेका छन् । ज्यामीहरुले विद्यालयको माथितिरको गाह्रो लगाईरहेको अवस्था भवनको तल्लो भाग भत्किएकोले कुने मानवीय क्षेती नभएको प्रधानाध्यापक सापकोटाले जानकारी दिए ।
विद्यायलयका प्रधानाध्यापक देवनारायण सापकोटाले भवन भत्किए पछी विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ । जुन जग्गामा विद्यालय भवन थियो त्यस्मा भवन निर्माण गर्न सम्भव नभएको र विद्यालयको आफ्नै अर्को जग्गापनि नभएकोले नयाँ संरचना निर्माण गर्न समस्या भएको जानकारी दिए । बिद्यालय भवन तल रहेको कृष्ण कँडेलको घर पनि जोखिम अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
कुस्मा- ८ चुवाको ४० रोपनी जग्गामा ७ करोडको लागतमा विष्णु बाटिका निर्माण गरिने
निसिखोलामा भोलिदेखि माटो परिक्षण सुरु हुने